Ahoana ny famoretana rakitra PDF amin'ny Adobe | Martech Zone
Nandritra ny taona vitsivitsy lasa izay dia nampiasa zavatra tsara aho fitaovana avy amin'ny antoko fahatelo hanindriana ny fisie PDF ampiasaina amin'ny Internet. Ny haingam-pandeha dia antony iray an-tserasera hatrany, koa na mandefa mailaka fisie PDF aho na mampiantrano azy dia tiako ho azo antoka fa voageja izy io.
Fa maninona no hangeja PDF?
Ny famatrarana dia afaka maka rakitra misy megabytes marobe ary hampidina azy ho kilobytes an-jatony, hanamora ny fandehanan'ireo motera fikarohana, hahatonga azy io ho haingana kokoa hisintona, ary hanamora ny fametahana sy ny fisintomana amin'ny mailaka
Indraindray manontany ahy ny mpanjifa hoe inona no toerana mety indrindra amin'ny famatrarana PDF… fa tsy manam-pahaizana momba ny faneriterena sy ny fanondranana entana, tsy fantatro mazava izay tokony hanombohana. Raha pro ianao ary mahatakatra CCITT, Flate, JBIG2, JPEG, JPEG 2000, LZW, RLE, ary ny famatrarana famatrarana ZIP… Azoko antoka fa azonao atao izany. Misy lahatsoratra iray taonina any.
Aleoko fotsiny mampiasa fitaovana faneriterena hanaovana ilay asa ho ahy. Soa ihany fa manolotra izany fotsiny i Adobe!
Ahoana ny famoretana PDF amin'ny Adobe Acrobat
Ny tsy fantatro dia ny ahy Adobe Creative Cloud ny lisansa dia efa nahitana fitaovana famoretana natsangana tao anatin'ny Acrobat, sehatra an'i Adobe ho an'ny fanovana, famolavolana ary fampidirana PDF. Raha misintona Acrobat ianao dia azonao atao ny manery ny PDF anao:
Manokatra PDF ao Acrobat DC.
Sokafy ny Optimize PDF fitaovana hamoahana rakitra PDF.
Mifidiana Fitaovana> Optimize PDF na tsindrio ny fitaovana avy amin'ny tontonana ankavanana.
Select Ampiasao ny tahiry eo amin'ny menio ambony.
Set mifanentana amin'ny Acrobat kinova ary tsindrio OK. Ny default dia ho any amin'ny kinova efa misy.
Select Fanatsarana farany eo amin'ny menio ambony mba hanavaozana ny famatrarana sary sy endri-tsoratra. Tsindrio OK rehefa vita ny fanovana.
Mifidiana File> Save As. Tazomy ilay anaran'ny rakitra mitovy amin'ny fanoratana ny fisie ankehitriny na ny anaran'ny anaran'ny rakitra vaovao miaraka amin'ny habe PDF kely kokoa. Misafidiana toerana iray ary kitiho ny Save.
Ahoana ny fomba hamehezana PDF amin'ny Adobe Online
Raha manana ianao Adobe Creative Cloud fahazoan-dàlana, tsy mila misintona ny Adobe Acrobat akory ianao hamoahana ny PDF anao! Adobe dia manana fitaovana an-tserasera azonao ampiasaina!
Ampidiro fotsiny ny PDF dia hofehezin'ny Adobe sy ampidininy. Mahafinaritra sy mora!
Mametaka PDF Online
Tags: Acrobat DCAdobeadobe acrobatrahona famoronana adobeadobe amin'ny InternetCCITTmamintina pdffamatrarana famatraranaflateJBIG2JPEGJPEG 2000LZWPDFfamatrarana pdfRLE